(L) အကျင့်ဆိုးများကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ခက်ခဲသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုကိုနှိမ်နင်းရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။
(L) အဘယ်ကြောင့်အတော်လေးကငျြ့ဆိုးခက် Is: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် (2016) ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေးဖျက်ဆီးစေရန် Wired သည်
သင့်ဦးနှောက် System ကိုသင့်ရဲ့နယူးနှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအားဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါစေသောဆု
ဖေဖော်ဝါရီ 11, 2016 03: 24 pm တွင်ဖြင့် Lecia Bushak
နှစ်သစ်ကူး၏ဆုံးဖြတ်ချက် - ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသို့မဟုတ်တီဗွီကြည့်ခြင်းနည်းခြင်းကဲ့သို့ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ကြောင့်မကြာခဏအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလိုက်နာခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုစတင်တွေ့မြင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ခဏတဖြုတ်အရှုံးပေးလိုက်ပြီး၎င်းတို့နှင့်အစပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်တွေးထင်ခဲ့သနည်း။ အသစ် သုတေသနလုပ်ငန်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အတိတ်ကဆုများကြောင့်အလွယ်တကူအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းကြောင့် - ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွင်ဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်မထားသည့်တိုင်ပန်းတိုင်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်တစ်ခါတစ်ရံစောင့်ရှောက်ရန်ခဲယဉ်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုမကြာခဏလက်ရှိတာဝန်များကိုထက်အတိတ်ဆုလာဘ်အပေါ်အလွန်အကျွံအာရုံစိုက်။ ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့နေ့စဉ် resolution ကိုမှကပ်ခက်ခဲတဲ့ရဖို့စတင်ခဲ့ပြီးသင့်ဦးနှောက်အစားဖက်တီးအစားအစာများ, ဒါမှမဟုတ် Netflix နှင့်အခြားအချိန်ကိုဖျက်ဆီး၏အပျြောအပါးပေါ် concentrates; dopamine မျှထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်ဆောင်ကြဉ်းဟန်ကြောင်းငြီးငွေ့စရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှတစ်ဆင့်အောက်ပါတစ်ခုခုအတွေးကွာ flushing အတွက်စီးကျလာတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမကြာခဏစဉ်မှာအတော်လေးစိတ်အာရုံထွေပြားဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ထားသည်။
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့အာရုံစိုက်သောအရာကိုကျော်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး," ဆူ Courtney တစ်ဦးစိတ်ဓာတ်နှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံဌာနပါမောက္ခများနှင့်လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာ, အကပြောပါတယ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်အတွေ့အကြုံအခြို့သောအမှုအရာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို biases နားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ ငါကျန်းမာအစားအစာသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာကိုရွေးချယ်နိုင်သော်လည်းငါ့အာရုံကို Alfredo fettuccini မှရေးဆွဲခံရတတ်၏။ အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်ကိုကြည့်စဉ်းစားနဲ့အာရုံစိုက်လေ့ကျနော်တို့ဆုခခြံခဲ့ရသောအတိတ်၌ပြစ်မှားမိတော့ဘာပဲဖြစ်၏။ "
သူတို့တစ်တွေကွန်ပျူတာပေါ်မှာတာဝန်ပြီးစီးအဖြစ်လေ့လာမှုမှာသုတေသီတွေက 20 သင်တန်းသားများကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်နှင့်ပြည့်စုံလေ၏သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အနီနှင့်အစိမ်းတ္ထုကိုရှာဖွေဖို့တောင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, သူတို့တစ်တွေအနီရောင်အရာဝတ္ထုဖော်ထုတ်လျှင်, သူတို့သည် $ 1.50 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့တစ်တွေအစိမ်းရောင်တယောကျကိုတှေ့လြှငျ, သူတို့ 25 ဆင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သူတို့က screen ပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံမျိုးစုံရှာတွေ့တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးစီးနေစဉ်ဒုတိယနေ့ရက်တွင်, သုတေသီသင်တန်းသားများကို '' ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေ။ သစ်ကိုတာဝန်အရောင်ပါဝင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်ပိုက်ဆံရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းသုတေသီသင်တန်းသားများကိုအနီရောင်အရာဝတ္ထုကိုမြင်သောအခါ, သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုယာယီ dopamine နှင့်ပြည့်စုံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ - အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဒေသများအတွက်။ Dopamine ကဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းစနစ်များကိုထိန်းညှိတဲ့ neurotransmitter ဖြစ်ပြီး, ဆုလာဘ်ရဖို့အရေးယူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို prods ။ စှဲသူကလူ dopamine ၏အနိမ့်ပမာဏရှိသည်ဟုယုံကြည်နေကြသည်ကြောင့်လည်းစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။
ဒါဟာအနီရောင်အရာဝတ္ထုများအတွက် $ 1.50 ၏ယခင်ဆုလာဘ်စိတ်အာရုံထွေပြားခဲ့ကြောင်းထွက်လှည့် - အရောင်အနီရောင်အစားမိမိတို့၏အာရုံကိုဒါ့ပြင်ကြောင့်သင်တန်းသားများကိုပုံစံမျိုးစုံကိုရှာဖွေရှည်ကို ယူ. ဆင်ခြင်သူတို့သာပုံစံမျိုးစုံအရေးပါသိတယ်လျှင်ပင်။ ညစဉ်ညတိုင်း Netflix နဲ့စောင့်ကြည့်တူသော - ဒါဟာအသစ်အဆန်းနှစ်သစ်ကူးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချွတ်ကျီတခါ, ဦးနှောက်တခါအစားအားကစားရုံသွားကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ချီကြောင်းပျြောမှေ့စသောအရာတို့ကိုအားဖြင့်အာရုံခံရဖို့ဆက်လက်အကြံပြုထားသည်။ ဤသည်နှစ်သစ်ကူးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမကြာခဏများမှာအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကျရှုံးဖို့ခြော.
"ဘာဒီနေရာမှာအံ့သြစရာင်လူတွေကိုဆုခခြံရတဲ့မအကျိုးကိုမျှော်လင့်မထားဖြစ်ပါတယ်" ဟု Courtney အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားထားသည်။ "ဆဲ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စေတဲ့ရဲ့အတိတ်ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအကျိုးကို system ကိုထည့်သွင်းဖြစ်လာသည်။ "
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ဒီမှာတရားခံဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း, ကသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအာရုံစိုက်နေဖို့မဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါသုတေသီများအခြို့သောသင်တန်းသားများကို dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖိနှိပ်နှင့်ပုံစံမျိုးစုံအစားအရောင်တွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်; သူတို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာတာဝန်ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
သငျသညျဖို့လိုအပျပါက, အချို့ပြောင်းလဲမှုများ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း သူတို့သိပ်ရည်မှန်းချက်ကြီးသို့မဟုတ်လက်တွေ့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်။ ထိုအမကြာသေးမီအဖြစ်, သငျသညျတလျှောက်ကိုသွားအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့သတိရပါ သုတေသနလုပ်ငန်း ဤသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစောင့်ရှောက်ခြင်းရှိလူများကကူညီပေးခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်ကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျြောမှေ့စအာရုံပြံ့လှငျ့အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်ဘောလုံးပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်သငျသညျ 2016 ပြုကြဖို့လိုအပ်သောအရာကိုပြီးမြောက်သို့ရှေ့ဆက်သင်ကျု့ံနိုင်ပါတယ်။
source: Anderson က B, Kuwabara H ကို, Courtney က S, Wong က D:, Gean အီး, Rahmim အေ Value ကို-အခြေခံပြီးအာရုံကို Orient အတွက် Dopamine ၏အခန်းက္ပ။ လက်ရှိဇီဝဗေဒ, 2016 ။